यसकारण खाली छन् नेदरल्याण्डका जेल
हेमकुमार श्रेष्ठ, नेदरल्याण्ड
युरोप तथा विश्वकै अति सभ्य र सम्पन्न देश नेदरल्यान्ड्का जेलहरुमा कैदी छैनन् अथवा जेल प्राय : खाली नै हुन्छन । सुन्दा अचम्म लाग्दो एकादेशको कहानी जस्तै लाग्छ, के संसारमा यस्तो देश पनि छ र जहाँका जेलमा राख्नका लागि अपराधिनै छैनन् । तर, बास्तवमा हो पनि यस्तै । गरिवी, भोक तथा अशिक्षा नै अपराधका कारकतत्व मानिन्छन भने यसका जिम्मेवार संस्था राज्यलाई मानिन्छ । राज्य कमजोर र बिपन्न भएको अवस्थामा अपराधिक घटनाहरुले ठाउँ लिन्छन । राज्य बलियो र सम्पन्न हुनका लागी उसका जिम्मेवार निकायहरु इमान्दार वा बफादार हुनु अती आवश्यक ठानिन्छ, ति हुन कर्मचारीतन्त्र ।
हो, नेदरल्यान्ड पनि एउटा यस्तो देश हो जुन कर्मचारीतन्त्र बाटै चलेको छ । यहाँका कर्मचारीतन्त्र इमान्दार र बफादार मात्रै हैन, आफ्नो काम कर्तब्य र अधिकारप्रति बडो जिम्मेवार छन् । देश नबन्नु र बिग्रदै जानुलाई र बिकास निर्माण नहुनुलाई हामी सरकारलाई दोषी ठहर्याउने मात्र होइन कि सरकार परिवर्तन नै गर्नु पर्छ भन्छौं । यसमा सरकारको कुनै तालुक हुँदैन । असल कानुन तथा बिधेयक बनाउन नसक्नु नै सरकारको सफलता तथा असफलता हो भन्ने हेक्का नहुनु हाम्रो मुर्खता हो । अत ः कानुन अक्षरस पालना गर्ने र गराउनेदेखी बिकास निर्माणमा अभिप्रेरित आमनागरिक र कर्मचारीतन्त्र नै देश वा राज्यका प्रमुख अङ्ग मानिन्छन, जुन बिषय नेदरल्यान्ड्मा बडो गम्भिरताका साथ पालना भएको पाइन्छ ।
पश्चिम युरोपमा अवस्थित पानी मुनिको देश भनेर चिनिने नेदरल्यान्ड्मा झण्डै १ करोड ७० लाख जनसंख्या रहेको अनुमान छ । शान्ति र मानव अधिकारको देश भनेर चिनिने अन्तरराष्ट्रिय फौज्दारी अदालत हेग समेत रहेको यो देश न्यायको क्षेत्रमा अति बिशिष्ठ मानिन्छ भने १६ औं शताब्दीलाई सुनौलो शताब्दी घोषणा गर्न सफल संबैधानिक राजतन्त्रात्मक देश नेदरल्यान्डका ७६ प्रतिशत जनताको अझै पनि राजपरिवारप्रति विश्वास रहेको हालैको एक तत्थ्यांकले देखाएकोछ ।
सन् १९६३ देखी पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ब्यबस्था गरिएको यो देशका कर्मचारी र नागरिकको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध रहेको विश्वास गरिन्छ जस्ले गर्दा जनताका दैनिकी अती सरल ढंगले चलिरहेको छ । कथंकदाचित जनताका प्रशासनिक काम कार्वाहीमा ब्यबधान खडा भएमा तुरुन्तै सरकारलाइ सू–सूचित गराइन्छ र सरल कानुनी ब्यवस्था गरिन्छ । राजनीतिकर्मी, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले आफूलाई कुनै पद धारणा गरेको अनुभूती गर्दैनन र आफूले कुनै कामको जिम्मेवारी पाएको अनुभव मात्र गर्दैनन् कि जिम्मेवारी पूरा नभएमा तुरुन्तै पद स्वस्फूर्त पद त्याग गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री लगायत नेता तथा सार्वजनिक पद धारणा गरेकाहरुका निम्ती यहाँ कुनै ब्यक्तिगत सुरक्षाको ब्यबस्था गरिएको हुँदैन भने प्रधानमन्त्री साइकल चढेर आमनागरिक जस्तै हात हल्लाउदै कार्यालय पुग्छन र फुर्सदमा बजार घुम्न निस्कन्छन् । आमनागरिक हरुलाई ‘हेल्लो’ भन्दै ‘सब ठीक छ ?’ भन्छन र नागरिकहरु हाँस्दै ठीक छ भन्दै आफ्नो धुनमा हुन्छन् । यसबाटै पुष्टी हुन्छ कि यहाँ अपराध हुँदैन ।
ब्यक्तिगत आयश्रोत् र नागरिक सुरक्षा भत्ताबाटै नागरिक हरुलाई प्रशस्त पुगेको हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा यो देश विश्वकै अग्रपंक्तिमा छ । कलेज सम्मका शिक्षा निःशुल्क छ भने बिद्यार्थीहरुलाई अध्ययन भत्ता तथा आबस्यक कर्जाको कानुनी ब्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ । प्रमाणपत्रको आधारमा लगानीको ब्यबस्था गरिएको हुन्छ भने कृषिमा ९० प्रतिशत अनुदानको कानुनी ब्यबस्था गरिएको छ । मानिसहरु खुल्ला स्वभवका हुन्छन् भने थोरै स्पस्ट बोल्छन ।
नेदरल्यान्डबासीहरु घरभित्रै बस्न रुचाउछन् । अनाबस्यक बाहिरी घुमघाम मन पराउदैनन् भने मनोबिज्ञानमा पनि अगाडी छन् । आधा वाक्य नबोल्दै ‘मैले बुझें’ भन्छन् । समय पैसा हो भन्छन् । बेकारमा समय ब्यतित गर्दैनन्। मुख्य किनमेलका बजार बाहेक बस्ती एरिया प्राय सुनसान देखिन्छन् । मानिसहरुमा नकारात्मक साँेचनै पाइदैन । बाटोमा जो भेटिए पनि हासेर ‘हेलो नमस्कार’ भनिन्छ र कोही अल्मलिएको जस्तो देखिएमा ‘म सहयोग गर्न सक्छु कि ?’ भनेर सोधिन्छ । पसलहरुमा सामान किन्दा केही पैसा नपुगेमा आफू भन्दा पछाडी उभिनेले ‘म हेल्प गरौ कि ?’ भनिन्छ । लडाईं झगडा गर्ने र रिसाउने मानिस देखी यहाँ टाढा बसिन्छ,यसलाई रोगको संज्ञा दिइन्छ । कोही त्यस्ता फेला परेमा नजिकको उपचार केन्द्रमा पठाइन्छ ।
कार्यालयका कर्मचारीहरुका लागी छुट्टै कोठाको ब्यबस्था गरिएको हुँदैन । मान सम्मान यहाँको पहिलो प्रथाकमिकता हो । सेवाग्रहीलाई सुरु मै के पिउनु हुन्छ भनी सोधिन्छ । एउटै पंक्तिमा सेवा दिदिरहेका हुन्छन ताकि पारदर्शीता होस् । बढीमा ५ मिनेटमा सेवा दिइसकेका हुन्छन् ।
यसका अलावा अहिले ९५ प्रतिशत सरकारी काम लगायत बैंकिङ कामहरु अनलाईन सेवामार्फत् हुन्छन् । अत : कार्यालयहरु प्राय खाली–खाली हुन्छन् । पुलिस प्रशासन र आमनागरिक बिच सुमधुर सम्बन्ध देखिन्छ । यातना निषेध गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो देश निक्कै अगाडी रहेको पाइएको छ, अनिबार्य स्वास्थ्य बिमाका कारण सरल र निःशुल्क उपचारको ब्यवस्था गरिएको छ ।
हरेक नागरिक करदाता हुनाले सरकारी वा निजी संयन्त्रहरु चौबिसै घण्टा चलायमान छन् । हरेक कोणबाट नागरिकहरु सरकारलाई सहयोग गर्न मन पराउछन् । अत : हेग शहरमा मात्रै करिब् २ लाख नागरिकहरु सरकारका निम्ती भोलिन्टियर सेवा दिएका छन् ।
लागु पदार्थ यहाँ खुल्ला गरिएको छ । मनोरन्जनको क्षेत्रमा यो देश अग्रपंक्तिमा रहेको छ ।न्यायक्षेत्र सबैका लागि खुल्ला भए पनि कानुनी लडाईं भने अति महँगो हुनाले आयस्रोत कम हुनेहरुका लागि सरकारले नि :शुल्क कानुनी उपचारको ब्यबस्था गरिदिएको छ ।
यस्ता कैयौं उदाहरणहरु छन, यो देशमा किन जेलमा कैदी छैन भन्ने पुष्टी हुनका निम्ती । जेलमा होटेलमा पाइने सम्पूर्ण सुबिधाहरु छन् । तर, जेल, जेलनै हुन्छ भन्ने यहाँका बासिन्दा हरु मान्यता राख्दछन । हरेक मानिस् सभ्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र हरेक क्षेत्रमा सरकारी संयन्त्रहरुको बफादारीता नै यहाँका जनतालाई नराम्रो भन्ने नै थाहा छैन । जन्मदेखी मृत्युसम्म राज्यबाट सुरक्षित भएकै कारणले अपराधी बन्नु पर्ने कारण भेटीदैन । कोही केही भुलबश कमि कमजोरी भै अपराधमा संलग्न पाइएमा अदालतले राज्यलाई दोषी ठहर्याउने गर्छ र उसका आवश्यकताहरु पूरा गरी पुनर्जीवन दिने फैसला सहित सरकारलाइ आदेश दिने गरिन्छ ।
जेल कर्मचारीहरु कहिलेकाँही स्वरोजगारका निम्ती हड्ताल गर्ने गर्छन किनकी जेलहरु प्राय बन्द भै होटेल र रेस्टुरेण्टहरुमा परिणत् भएका छन् ।
अब हामी सबैले सोचौं, अपराध किन र गर्ने ? जेल कस्का निम्ती ?
लेखक श्रेष्ठ, प्रवासी नेपाली मन्च नेदरल्याण्डका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।